Ndakasvira Tasha hure repamaStones rainge rine beche rakafuta kunge chitsuro! – Makuhwa.co.zw
Ndakasvira Tasha hure repamaStones rainge rine beche rakafuta kunge chitsuro!
Ha, ndini paye ndakuvara zvangu nenzara yekuda beche. Musikana wangu ainge avanemazuva aena kuSouth Africa to get zvinhu zvepaFlea market yake.
Parakaenda takange tiine almost week rese tisina kusvirana, nekuti it was that time on the month. Ini ndainge ndagara ndatokuvara nezemo, ndaigara kuFio kuriko kwandakakurira saka mabhebhi ese emumaraini ndinomaziva apa vese we are close zvedu. Vazhinji vacho ndakapfuura nepavari vaitoziva mboro yangu kuti irisei.It was Friday, hoza weekend usiku kuma 8 pandakabva kumba ndakananga hangu dakananga hangu pamaStones pabhawa. Ndakabva mboro ndakaita yekubatira mumaoko sebhotoro redoro yakamira kuti twii, zvekuti vakafa hapana chavakaona. Ndini uyo, ndakasvika mupub ju box ichiridza kasong kaSystem Tazvida kaye kanoti “….ida mwana zvifambe, uchadya izvozvo”.
Vasikana vakange vakazara ipapo vachiita zvidavado. Painge pane vasikana nevakadzi vemazera ose, vamwe vaiita kunge vakapusa, vamwe vachunhuwa weti, vamwe vaitove anagogo, tumwe tudiki waitofunga kuti havazive mboro.Inini wacho yaingova handsome bedzi, handsome pfacha chaiyo zvekuti dai ndirimukadzi ndaitonzi tsvarakadenga chaiyo. Ndakadaidza kamwe kamusikana kakange kachizama kutamba kwasa-kwasa kakange kane mazigaro mahombe kuita kunge ndiko kainge kakandirwa round rawo mwedzi iwowo. Kungoona izvi mboro yangu yakabva yatanga kufemera mudenga. Ndakabvunza quotation zvikanzi short time yaiita $5, husiku wese yainzi $40 neprotection, nyoro yainzi $80 kusanganisira danger allowance.
Ndakabvunza kuti ko kana ndine kamboro kadiki saizi yepenzura, zvikanzi ko kana
uchikwira kombi yekutown vakaonda vanobhadhara mari shoma here? Ndakati ndaida
kuziva kuti short time yakamira sei zvikanzi tinoenda paplace ine darkness wondisvira nekumashure, ukatunda mari yako yapera. Zvikanzi asi no kissing, no kundibatabata mazamu because handisi mukadzi wako. Hure ranga riine rough iroro, mafeelings angu akambotiza. Mboro ikabva yarara, kutokotsira chaiko zvekuti ndakatombufunga kuti haisisipo. Ndakati ndaikumbirawo kuziva zita rako, akabva aramba, akati handiti urikuda kusvira chete, ko zvemazita ndozvineyi. Ndakafunga kuti ndisiyane naye. Ndakatukwa wena, zvikanzi “saka wanga uchida kutamba neni haikona. Machende ari muhapwa”. Ndakazotora kamwe karibho kakanditi $30 husiku hwese sezvo ndakange ndakataurira kuti kamboro kangu kadiki kaitomiswa zvako neweti.
Related Topics:Ndakasvira Tasha
Dzidziso yekusvira vakadzi kuti vatundewo pabonde!
Ndakasvirwa nemukomana weshamwari yangu, musikana wake achibika muKitchen!